September 07, 2016 – Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Baledweyne ayaa waxa uu sheegay in ay kasoo horjeedaan shirka maamulka loogu sameynayo goboladda Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ee ay gogoshiiso taalo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe.
Gudoomiye Dabageed ayaa sheegay hadii ay yihiin maamulka Gobolka Hiiraan inaysan jirin cid kusoo wergalisay shirkaasi ayna idaacadaha iyo taleefishinada ka dhagaysteen, aysana hadda diyaar u aheyn in y ka qeyb galaan shirkaasi.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ku sugnaa magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya waxaana uu maanta dib ugu laabtay magaalada Baledweyne.
Odoyaasha iyo Waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa horay u diiday ka qeyb galka Shirka maamulka loogu sameynaayo Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, waxaana ay ku doodaayaan in Hiiraan laga dhigo laba gobol ka dibna maamul loo sameeyo.
Dabageed ayaa sheegay in Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe aysan u baahnayn dhex dhexaadinta dowlad goboleedka IGAD, oo ay Iyagu xoolahooda qaybsan karaan.
September 8, 2016 tuugahaladilo2015